GMMA-60L ukondla auto beveling umatshini 0-90 degree - China Shanghai Taole Machinery
GMMA Plate koomatshini edge beveling yokugaya zibonelela ukusebenza ophezulu kunye nokusebenza precisious kwi ukuwelda Wotho & processing ngokuhlangeneyo. Nge kuluhlu olubanzi ngokokusebenza ipleyiti ubukhulu 4-100mm, Wotho isithunywa 0-90 degree, kunye noomatshini zifanele ukuba khetho. Advatages yeendleko ephantsi, ingxolo libya nomgangatho ophezulu.
Indawo Origin: KunShan, China
Delivery Umhla: 5-15 Days
GMMA-60L ukondla auto umatshini beveling 0-90 degree
GMMA-60L auto lweehagu beveling umatshini kunye ukusebenza ngoluhlu uqinisa 6-60mm babulingana nesandla, isithunywa Wotho 0-90 degree adjustable kwi metal ipleyiti kumngcipheko beveling & nokugaya lokulungiselela weld. Kunye iingenelo ngesantya esiphezulu kunye nendawo ophela eliphezulu umphezulu Ra 3.2-6.3, ukwenza lula kwaye adjustable kwi kuluhlu yokusebenza ngokubanzi. Omnye umatshini ingaphatha ezininzi requrements Wotho.
Kukho 2 processing Way:
Model 1: mgawuli ukubamba ngentsimbi kwaye kukhokelela kumatshini ukugqibezela umsebenzi lo gama phambili iipleyiti ngentsimbi encinane.
Model 2: Machine kuhamba ngohlangothi zentsimbi kunye umsebenzi ngokupheleleyo ngelixa phambili iipleyiti ngentsimbi enkulu.
Model No. GMMA-60L ukondla auto machine beveling
Speed ​​othini 1050r / min
uqinisa Ubukhulu 6-60mm
uqinisa Ububanzi > 80mm
Process Ubude > 300mm
Wotho ingelosi 0-90 degree adjustable
Wotho Ububanzi Single 10-20mm
umsiki QTY 5PCS
Ubude Worktable 700-760mm
Qaphela: Machine Standard kuquka 1pc mgawuli intloko + 2 iseti Ifaka + Izixhobo kunokwenzeka + Operation Manual
1. ezifumanekayo metal ipleyiti carbon intsimbi, intsimbi engatyiwa, aluminiyam etc
2. Ngaba ukusebenza "V", "Y", "U", "J" nkqo nethe tyaba ziyahluka uhlobo lokudibanisa Wotho
3. Milling Uhlobo kunye Previous oluphezulu ukufikelela Ra 3.2-6.3 ukuze komhlaba
Cutting 4.Cold, okonga umbane kunye Ingxolo Phantsi, ekhuselekileyo More kunye nokusingqongileyo
5. uluhlu zokusebenza ngokubanzi kunye uqinisa ubukhulu 6-60mm kunye nengelosi Wotho 0-90 degree adjustable
6. Easy Operation and ukusebenza eliphezulu
Previous: GMMA-60s Plate machine edge yokugaya
Okulandelayo: GMMA-25A-U longele machine beveling
0 ukuya 90 degree machine beveling
Wotho degree 90
auto machine feed beveling
Beveling ke bambethe ilinen Ukususa machine
ipleyiti Wotho Milling Machine
Plate ngomshini Ngu Cnc Milling
Plate umshini wokugaya
Steel bambethe ilinen Ukususa Machine
Plate Sub Kuba Milling machine
GMMA-60s metal self esiqhutywa edge chamfering m ...
GMMA-20T uhlobo itafile umshini wokugaya for amancinci p ...
Yempendulo-R3T edge metal machine udini chamfering
GMMA-60R edge icala double umshini wokugaya
GMMA-60s Plate machine edge yokugaya